WAXAAN KA SAMAYNAYNAA KULEYLIYAHA QUBAYSKA + VIDEO - KUFSI
Nafaqeynta digaaga waa hawl aad u xiiso badan.
Isku-xiraha iskood u sameysashada waa mid aad u faa'iido leh iyo sidoo kale mid dhaqaale.
Qalabka foosha ee lagu soo saaro warshado gaar ah waa raaxo qaali ah, kuwa doonaya inay digaagaan inta badan ma awoodaan inay iibsadaan qalabkan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo khabiiro ah oo ka mid ah qalabka kuleelka ah ee foostooyinka, foornada, iwm, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa kuleyliyaha qaboojiyaha.
Sidaa daraadeed, maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa si buuxda sidii aad u samayn lahayd gacan-qabsi leh gacmahaaga.
Shuruudaha ugu muhiimsan waa in la raaco marka la isticmaalayo kululeeyaha laga bilaabo qaboojiyaha, iyo sidoo kale nidaamka qalabkan
Faa'iidada ugu weyn ee qaboojiyaha qaboojiyaha waa warshadaha warshaduhu leeyihiin waxyaabo aad u muhiim ah: rinjirta kuleylka.
Si aad u bilowdo habka loo soo saaro qalabka noocan oo kale ah, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato tirada ukumaha ee aad ku geli doonto kulaylka, waayo bilowga beeralayda digaaga ayaa tirada ugu wanaagsan ee ukunta ay noqon karto wax ka badan 50.
Shuruudahataas oo la raacayo marka la isticmaalayo kulubka:
Tirada maalmaha ay tahay in ay ka gudbaan ka hor intaan hirgelin waa inay ahaadaan ugu yaraan 10.
Toban maalmood gudahood, ukumaha waa in lagu hayaa masaafo ilaa 1-2 sentimitirba midba midka kale.
Heerkulka 10 maalmood gudahood waa in uu ahaado ugu yaraan 37.3 digrii oo aan ka badneyn 38.6 digrii.
Waqtiga la gelinayo ukumaha, qoyaanka waa inuu ahaado 40-60%. Dheeraad ah, marka gu'gabadu horay u bilaabaan inay muuqdaan, qoyaanku wuxuu kordhay 80%. Sida soo socota xilliga doorashada ee chicks, qoyaanka ayaa la dhimay.
Ukuntu waa in ay ahaataa mid taagan oo leh fiiq fiiqan ama meel bannaan. Meelaha qumman, ukunta ee saxaarada waxaa lagu dhigaa xagasha 45 darajo.
Haddii aad isku deyeyso inaad dillaacdo digaag iyo bustey, ukumo waa inay ahaataa xagal 90 darajo ah.
Haddii ukumaha saxda ah ee looxaan lagu dhejiyo dhulgariir, markaa waxay u soo gudbaan xagasha 180 darajo, iyadoo ku xiran booska hore. Inta ugu badan oo dhan, tani waxay ku jirtaa saacad kasta, laakiin ugu yaraan hal saddexdii saacadoodba mar. Ka hor inta chicks ka dillaacday ukunta, taas oo ku saabsan saddex maalmood ka hor inta ay u qabashada, waxaa fiican in aan ku duudduubin ukunta.
Wixii kuleyliye iskiis ah, hawo-qaadashada aad ayuu muhiim u yahay. Iyadoo caawimaadda hawo-qaadashada waa qawaaniinta iyo qoyaanka kuleylaha. Xawaaraha qiyaasta waa inuu ahaado ilaa 5 mitir halkii labaad.
Habka soo noqnoqashada ee chicks ayaa aad ugu dhow habka dabiiciga ah.
Qorshaha naqshadda ama waxa uu ka kooban yahay
Ma jirto qaboojiye aan loo baahnayn oo da 'old ah oo loo baahan yahay in lagu tuuro qashin-qubka, waxaad ka samaysan kartaa xashiishad ka soo baxda marka laga reebo digaagga.
Da ' qaboojiyaha waa in laga saaraa qaboojiyaha. Markaad isticmaaleysid kuleyliyaha, waxaad u baahan doontaa isku xirka shabakada 220 V.
Si aad u qorto qalabka, waxaad u baahan doontaa qaybaha soo socda: heerkulbeegga shaybaarka, sheyga KR-6, ama waxaad qaadan kartaa noocyo kale, nalal.
Awoodda iska-caabbinta iskuxirku waa inuusan ka badneyn 1 watt. Qaabka dhismaha waa in lala xiriiriyaa nalalka shabakadda. Nalalka kulubka waxaa loo isticmaalaa L1, L2, L3, L4, oo haynaya heerkulka ilaa 37 darajo. Lamp L5 wuxuu u siman yahay dhammaan ukumaha ku yaala barxadda, sidoo kale wuxuu hayaa qoyaan fiican.
Xiriirka loo isticmaalo wuxuu furayaa xidhiidhada KP2, iyo marka heerkulka maskaxdu hoos u dhacdo, nidaamku wuxuu soo celiyaa. Ka dib markii isticmaalka ugu horreeya ee kiniisada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo qaabka heerkulka leh dhowr lambarro mar walba.
Wax la sameeyey waa inaysan isticmaalin wax ka badan 40 watts oo awood ah.
Marka la naqshadeeynayo masraxa, waxaad isticmaali kartaa wareegga hawada dabiiciga ah iyo hawada macmalka ah.
Ukumaha ku yaala barxadda Geli gacmahaaga, iyo sidoo kale isticmaalka qalab gaar ah.
Waxaa jira xaalado korontada ku xiraya, sidaa darteed waxaad ku dari kartaa baaquli biyo diirran oo ku jira masraxa, taas oo muddo dheer ku badali doonta laydhka.
Maxaad sameyn kartaa qaab
Qaab-dhismeedka waxaa laga samayn karaa baakad ka timaadda TV-ga. Gudaha waxaa lagu xoojinayaa xoojinta ama wabiyada. Gudaha jirku waxa uu noqon karaa kartrido leh nalal, koronto la'aan, si loo ilaaliyo qoyaanka caadiga ah iyo heerkulka. Mishiinnada bulaacadaha ayaa si fiican ugu habboon.
Si aad u nadiifiso hawada, waxaad isticmaali kartaa weel biyo ah.
Masaafada u dhexeysa laydhka iyo ukumuhu waa inay ahaadaan 19 sentimitir.
Masaafada u dhaxaysa baararka waxay noqon kartaa ilaa 15 sentimitir.
Si aad u hubiso heerkulka kuleylaha waxaad isticmaali kartaa heer-kulka caadiga ah.
Qaybta sare ee dhererka waa in laga saaraa, waa in lagu daboolaa wax khudradda cufan. Dhinaca derbiga waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso qubeyska.
8 x 12 sentimitir godka ayaa lagu sameeyaa xagga sare ee maskaxda, si ay isha ugu hayaan heerkulka iyo hawo-qaadashada.
Maxay tahay saldhigga naqshadda
Saldhigga hoose ee masraxa, waxaad u baahan tahay inaad sameyso sadax god oo dabiici ah oo 1.5x1.5 cm oo cabbir ah, qadarka biyaha ee loo baahan yahay maalintii ma aha wax ka badan nus wareeg. Goobaha u dhexeeya gumeysiga ayaa dhigaya ukunta, laakiin aanad si adag u dhigin midba midka kale, sidaa darteed waxaad samayn kartaa 180 darajo.
Si loo helo nalalka isticmaalka uumiga ah ee 15 ama 25 W. Si aad uga dhigto in ay u fududahay chicks si aad ugu dhejiso qolof adag. ha iska joojin uumiga.
Marka ay ukun soo noqoto, waxay qaboojiyaan, waxay qaadataa laba daqiiqadood. Inta lagu jiro muddada kuleylaha waa in lagu hayaa heerkul ah 38.5 digrii.
Jidhka sare ee qalabka waa in lagu daboolaa mesh cufan. Sidoo kale gacmahaaga waxaad u baahan tahay inaad ku xirto laba nalalka 40W. Bees waa kulayliye aad u fiican, iyo sidoo kale la socoshada nidaamka qoyaanka ee fiicnaanta. Waxaa loo isticmaali karaa sida rugta shaqada, iyo maya. Si ay beesku u gashadaan inaanay gashanin, jiritaanku wuxuu ku dhuftaa mesh aad u fiican oo lagu dhajiyay qaabka. Qashinka waxaa si toos ah loogu dhejiyaa shabaqa, halkaasoo ukunta ugu horreysa ay ku taal, kaas oo lagu daboolay maro adag.
Noocee hawlgalku waa inuu kobciyaa?
Ka hor inta aanad bilaabin muddada kabuubinta, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in wax walba ay ka shaqeeyaan qalabka kuleelka muddo saddex cisho ah, iyo sidoo kale in la sameeyo heerkulka loo baahan yahay ee ukunta.
Qodobbada muhiimka ahi waa ma jirin wax kulayl ah oo ku jira xariirkahaddii kale dhammaan chicks way dhiman karaan.
Waa lagama maarmaan in lakabiyo ukumaha saddexdii saacadoodba, maxaa yeelay waxaa jira farqi u dhexeeya labada dhinac ee 2 digrii.
Nidaamka heerkulka ee kuleylaha waxaa lagu arkay iyadoo ku xiran noocyada digaaga ee aad dooratay.